ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်အဘယ်သူဆပ်ပေးသငျ့သ – အမျိုးသားများအဘို့အကြံဉာဏ်
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဖေဖော်ဝါရီ. 13 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
ကချိန်းတွေ့ဖို့ကြွလာသောအခါပြည်သူ့ Hang-ups အမျိုးမျိုးရှိသည်, နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသုံးအများဆုံးတယောက်ရက်စွဲများအတွက်ပေးဆောင်အကြောင်းကိုအလေးပေးသို့မဟုတ်အနုတ်ခံစားသည်. တို့သညျဤစိတ်ဖိစီးမှုမှကွဲပြားခြားနားတုံ့ပွနျကွ. တချို့တို့သည်အစဉ်ပေးဆောင်, ဒါပေမယ့်လျှို့ဝှက်စွာစစ်ဆေးမှုများရေးသားနေတုန်းအတွင်းရှိအနုတ်လက္ခဏာခံစားရ. လူတချို့တစ်ဝက်ကိုတစ်ခုချင်းစီကိုပေးဆောင်အပေါ်အပြင်းအထန်တောင်းဆိုဖို့နှင့်အချို့သောယောက်ျားအကြောင်းကိုလွင်ပြင်စိတ်ဆိုးကြ. သူတို့ဥပဒေကြမ်းဆပ်ဖို့ကိုယဇ်ပူဇော်လျှင်လူတချို့ကိုပဲစစ်မှန်စွာခေတ်အဟောင်းပုံ၏ကြောက်လန့်.
ကိုယ့်အထဲကပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်အပြည့်အဝပေးချေရန်အပြားငြင်းပယ်ကြလိမ့်မည်သောလူတို့၏သိ, အစားဥပဒေကြမ်းတစ်ဝက်တွင်အတိအကျခွဲထွက်သင့်ကြောင်းဇွတ်အတင်း. အဘယ်ကြောင့်? သူတို့သာသည်နောက်တဖန်သူမထံမှနား ထောင်. ဘယ်တော့မှရန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူတစ်စျေးကြီးရက်စွဲများအတွက်ပေးဆောင်ခြင်း၏ဤမျှလောက်များစွာသောအတွေ့အကြုံများရှိခဲ့ကြပြီ. ဒီတစ်ခါလည်းသင်သည်ဤသင်တို့ထံသို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြရ. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကသင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြသောအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီးသင်နှင့်အတူ vibing ကြသည်ထင်, ဒါကြောင့်သင်ပေးဆောင်ဖို့ကမ်းလှမ်း, သူမ၏ကွယ်ပျောက်နှင့်ဘယ်တော့မှမသင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသို့ပြန်လာရှိသည်သာ. ဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားအများအပြားသာမန်သို့မဟုတ်အဲသည်လောက်ညာဘက်ကြောက်မက်ဘွယ်သောရက်စွဲများများအတွက်ပေးဆောင်ခဲ့ကြပြီးအသင်ကသင်မကျေနပ်. Hard-ရရှိခဲ့ပြီးငွေသားလည်းလျော့သောသူအပေါင်းတို့သည်. ထိုအခါငါငါတကယ်ကျင့်သောရ. ကျပ်တည်းစွာမခံစားရမယ့်သူ!
တန်းတူရေးဤခေတ်တွင်သူသည်လူသည်ကိုယ့်ရိုးရိုးကြောင့်ဥပဒေကြမ်း၏တပြင်လုံးကိုကုန်ကျစရိတ်ခြေရန်မျှော်လင့်ရပါမည်အဘယ်ကြောင့်? အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးချင်တယ်, လည်းဤက.
ငါ့ကိုအသင်အနည်းငယ်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုပြောပြကြစို့. ဤသူသည်သင်တို့သည် အကယ်., သင်ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်သူမ၏ပေးဆောင်ခြင်းတစ်ဝက်ပေါ်ဇွတ်အတင်းနေကြတယ်, ဒီမဆိုအရည်အသွေးကောင်းဣတ္သောမိန်းမကွာတွှေလိမ့်မယ်. ငါသည်သင်တို့သူတို့ချိန်းတွေ့လူတို့ကလှည့်ပတ်သူတို့ရဲ့ဣတ္စွမ်းအင်ဖြစ်ငါ့အမျိုးသမီးများ clients များကိုသွန်သင်ကြည့်ရှု, ကပိုကောင်းထိုလမ်းအလုပ်ဖြစ်တယ်. ဒီလျောက်ပတ်ကိုလက်ခံရရှိပြီးလူကိုအချစ်ဇာတ်လမ်းသူမ၏ခွင့်ပြုဆိုလိုသည်. သင်တို့နှစ်ဦးစလုံးကသင့်ပုလ္စွမ်းအင်မဖြစ်နိုင်, မဟုတ်ရင်အချစ်ပွင့်လန်းမနိုင်. ဒါဟာပိုပြီးသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအိမ်ထောင်ဖက်ကိုချိန်းတွေ့ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်ရလိမ့်မည်, အဘယ်သူသည်သိသာတစ်ဝက်ဥပဒေကြမ်းပေးဆောင်ဆို. ဒါကြောင့်ငါသည်သင်တို့၏အလိုမကျနားလည်ဖို့နေစဉ်, ငါသည်အမြင့်မားခြင်း gentlemanly အမှုကိုပြုမှဆက်လက်နှင့်ဆပ်ဖို့ရာပူဇော်သက္ကာကိုအကြံပြုပါသည်. တစ်ဦးရဲ့အရည်အသွေးသည်မိန်းမအဘို့သင်အမှန်တကယ်နားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်.
သာသင်ကြိုက်မိန်းမနှင့်မပါဘူး. တိုင်းရက်စွဲအပေါ်ဆပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းချက်ကို. အပြင်ဒီရုံမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းမွန်သောပုံစံနှင့်ကောင်းမွန်သောအပြုအမူဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကိုမှ, စကြဝဠာကိုကြည့်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင်တဲ့ကောင်းမှုလုပ်နေ. ဒါဟာကိုသတိမပြုမိသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ.
ငါတကယ်ကောင်းကောင်းမသွားခဲ့တဲ့ရက်စွဲပေါ်တွင်တစ်ချိန်ကခဲ့သည်. သို့သော်အဆုံးမှာကောင်လေးတကယ်စားရန်အဘယ်အရာကိုစွဲသောသူအဖို့နဲ့သောက်စရာအညီအတိအကျဥပဒေကြမ်းကိုတက်ကွဲနေတဲ့ဂဏန်းပေါင်းစက်မှနှုတ်ဆောင်ခဲ့ (ကောင်းစွာတော့ဒါဟာသူ့ဖုန်းပေါ်ရှိဂဏန်းပေါင်းစက်ခဲ့ထင်ပေမယ့်). အဖြစ်မကြာမီဤငါယခင်ကညာဘက်ငါ့ကိုအထွက်ယိုစီးမှုခံစားခဲ့သမျှဆွဲဆောင်မှုခံစားခဲ့ရဖြစ်ပျက်ခဲ့သကဲ့သို့. အလို! ငါသည်ဤကဲ့သို့သောသူတစ်ဦးဦးနှင့်အတူဖြစ်ခြင်းကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါဘယ်တော့မှမနိုင် – သူသည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်၏ အကယ်. ယခုသူနှင့်အတူအသက်ရှင်စေခြင်းငှါကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအဘယ်သို့သောစဉ်းစားကြည့်ပါ! သင်ပရိဘောဂများအတွက်လေတော့ရှိ Shopping မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်ပါ? ငါ့မွေးနေ့မှာ ပတ်သက်. အဘယ်သို့, ကျွန်မလည်းထို့နောက်တစ်ဝက်ပေးဆောင်ကြရလိမ့်မည်? သိပ်ရင်ခုန်စရာမ.
ကိုယ့်အကြောင်းကိုရွှင်လန်းသောအားဖြင့်ပေးဆောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ကျောက်စိမ်းဖြစ်လာရှောင်ကြဉ်ပါ. ချိန်းတွေ့၏ကြမ်းတမ်းသောနှင့်ကျဆင်းနေအတွက်, သင်တို့ကိုနှုတ်ယူအမျိုးသမီးအချို့သင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြန်လာပါပျောက်ကွယ်သွားနှင့်မည်မဟုတ်. ဒါဟာသင်တန်းများအတွက်တန်းတူင်. သင်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရက်စက်စွာနဲ့ရိုးသားလျှင်သင်တစ်နေရာရာမှာလိုင်းတလျှောက်တွင်တစ်စုံတစ်ဦးမှတူညီသောပြုမိပါပြီကျနော်အလောင်းအစား. သို့သော်, သင့်ရဲ့အမျိုးသမီးတစ်လျှောက်လာပါဘူးသည့်အခါ, နှင့်သင်သူမ၏အထူးခံစားစေနှင့်သင်ပေးဆောင်ဖို့ကမ်းလှမ်းကြပြီအချစ်ဇာတ်လမ်းဖန်တီး, မသာဤဆွဲဆောင်မှုတက်နေ၏လိမ့်မယ်, သို့သော်သူမခိုင်မာဘို့သင့်ကိုအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်ဟု, ပုလ္သင်တို့ကိုအဘယ်သူဖြစ်ကြ.
ရဲ့ chivalry များအတွက်ရပ်တည်ချက်ကိုယူပါစေ - ဒါနဲ့ခေတ်အဟောင်းဖြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုဟုပြော, အချစ်နှင့်စိတ်အားထက်သန်. အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော့်နောက်ကျောထိုင်နှင့်သင်သူမ၏အဘို့ဤအရာမျိုးကိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်မိန်းမအားဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ပျော်မမွေ့, နောက်တဖန်သင်တို့သို့မဟုတ်မကြည့်ရှုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းရှိမရှိ. သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်ကသင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်ကိုသိကျွမ်းခြင်း၌-Basque နိုင်, အပြည့်အဝပုံမှန်လည်ပတ်နေနှင့်လွတ်လပ်သောလူကို, သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးဆက်ဆံဖို့ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်, ့သူလုပ်နိုင်ကြောင့်. မာနထောင်လွှားမလေးပါ.